Itemplate ukuyila ii-triptychs | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Itemplate ukuyila ii-triptychs
UManuel Ramirez | | Idizayini yeMifanekiso, Izibonelelo, itemplates
Ukuba ulungiselela uyilo a uhambo kwi-intanethi ngokuqinisekileyo ukuba ukhona template iza kuluncedo ukukukhokela. Kuyo uyakufumana yonke into oyifunayo ukuthintela iimpazamo xa uyiprinta kwaye ngaphezulu kwako konke ukunqanda izoyikiso kunye nezilungiso zomzuzu wokugqibela kuba isicatshulwa esithile okanye umfanekiso obungalindelanga unqunyulwe.
Itemplate in Ifomathi ye-AI (Umzekeliso) kwaye unemigca yokusonga i-triptych, iindawo zokopha, indawo zokuprinta, izicatshulwa zesikhokelo, njl. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba usebenzisa le template kwiincwadana zakho unokwenza uyilo olubi, kodwa isicatshulwa okanye umfanekiso awusoze unqunyulwe.
Kwikhonkco lokukhuphela esikushiye apha ngezantsi uya kufumana iitemplate ezininzi zeencwadana kunye neettytych eziza kuba luncedo kakhulu kwiphulo lakho lokuthengisa okanye ekukhuthazeni ishishini lakho
Khuphela | Izikhokelo ii-triptychs ezikwi-Intanethi
1 Yintoni i-triptych
2 Injani ifomathi ye- triptych
3 Khuphela iitemplate zencwadana
3.1 Incwadana yeshishini
3.2 I-Triptych eluhlaza okwesibhakabhaka kwiiflaya
3.3 Incwadana yencwadana yeshishini-eluhlaza
3.4 Kwishishini kwi-abstract-blue
3.5 Iimilo zejiyometri zethathu
3.6 Ithemplethi yanamhlanje
3.7 Uhambo olunamandla
3.8 Incwadana yeshishini ngezandla
3.9 Ubume bePolgonal ye-triptych
3.10 I-Triptych enesangqa esinemibala
3.11 Incwadana yobungcali
3.12 Uhambo olunamacala amathandathu obunxantathu
3.13 Incwadana yokuthengisa yobungcali
4 IiWebhu zokwenza ii-triptychs kwi-intanethi
Los ii-triptychs ziluncedo olukhulu ekunikezelweni kweprojekthi entsha apho siza kuthengisa khona ezinye iinkonzo okanye imveliso. Ngapha koko, isasetyenziswa ngokubanzi kwaye siyabulela ngakumbi kwiitemplate esinokuthi sizifumane kwiwebhu ukuze kungabikho mfuneko yokuba sikhangele umyili wezinto ezizezakho. Siza kukubonisa ukuba ziyintoni kwaye zenziwa njani.
Ukuzenza namhlanje kungavakala ngathi siza kusebenza, kodwa zikhona iiwebhusayithi ezinokusinceda senze ezomntu ukuba asiyifuni le template inokuthi nayo ilunge. A ifomati yomfanekiso yazo zonke iintlobo zezisombululo ukuba ngazo zonke izimvo esiza kukubonelela ngazo apha ngezantsi, ngokuqinisekileyo uya kubonwabisa abathengi bakho xa becela i-trippy. Ziphose kuyo.
I-triptych yincwadana esetyenziswa ngokubanzi kwintengiso kwaye esivumela, Enkosi ngokusongelwa kwiindawo ezintathu, bonisa lonke ulwazi oluyimfuneko ukubonisa imveliso okanye inkonzo kwinkampani. Ihlala i-297 x 210 mm ngobukhulu kwaye ihlala yaziwa njenge-A4.
Ukuba sidinga imveliso esiyifunayo bonisa uphononongo lwabathengi ngamava abo, uluhlu olupheleleyo lweenkcukacha zobuchwephesha kunye nezo foto zibonisa zonke iinkcukacha zaloo mveliso okanye inkonzo, i-triptych enesiphelo esihle ihlala inika imbonakalo entle kakhulu. Ayisiyomboniso kuphela, kodwa lonke ulwazi olunokuqulatha.
Ngokusengqiqweni, kwi ube incwadana yolwazi esongelwe kwiindawo ezintathuAyizukubabiza nje ngomgangatho umntu anokuyenza, kodwa ngenxa yezizathu ezithile ezinjengeenkomfa, izithethi, ukuvula idatha okanye ukubonisa iindwendwe ezikhethekileyo yenye yeefomathi ezisetyenziswa kakhulu.
Injani ifomathi ye- triptych
Sele sithethile ngomgangatho osemgangathweni nge-A4 kunye ne-297 x 210 yeemilimitha zayo. Kodwa sinokuthetha ngezona ndawo ziphambili. Njengakuyo nayiphi na incwadana, ikhava yeyona axis iphambili kwaye apho kufuneka sazi indlela yokubaphatha kakubi abathengi abanokudlula kwikhawuntara.
Kwelo qweqwe sinako beka isilogeni okanye isilogeni semveliso kunye nenkampani enomfanekiso ochonga ngokukhawuleza iinkonzo zayo okanye imveliso. Yindawo efanelekileyo yelogo yenkampani kwaye kuxhomekeke kwitemplate esinokuya kuyo ukusuka kuyilo oluncinci ukuya kwezinye ezinesitayile ezitsala umdla; soloko ungawulibali umsebenzi osisiseko we-triptych ekufuneka ihlale inxulunyaniswa nenkampani okanye intengiso okanye umkhankaso wentengiso.
Onke amaphepha anobuso bawo asivumela ukuba singene kwizinto esizithatha njengezona zibalulekileyo kwinkampani okanye kwimveliso yethu. Ukuba besithetha ngesela yewayini, sinako bonisa ezona zinto zibalulekileyo zomdiliya ovuniweyo kunye nale miba yenkqubo yokusela. I-triptych isivumela ukuba sibonise ngokubonakalayo, kunye nangokungaqhelekanga, ezo nkcukacha zibonelela ngolwazi ngakumbi.
Ngenxa yesithuba esithathwa yitrinttych, sinako Sebenzisa iifoto ezinkulu kanye ukuba singadlala ngale fomathi ethe nkqo; kuyakuhlala kukho ukhetho lokusebenzisa uthotho lweefoto ezithi xa kuvulwa i-triptych ibe ngumfanekiso opheleleyo.
Kubalulekile oko ukuba ulwazi kunye neefoto zonyusa umdla umthengi malunga nemveliso yethu. Ukusuka kwintoni eya kuba yibhotile ngokwayo ngeglasi ezaliswe ukubonisa ubume bayo kunye nombala, kwezi foto zesidiliya ngamanye amaxesha okuqokelela kunye nemveliso. Yonke le nkqubo ukusukela kwimidiliya ukuya kwimveliso yokugqibela inokuqokelelwa kunye nomdiliya weefoto kunye neefoto ezibonisa ubugcisa bazo.
La Iphepha lokugqibela linokushiywa kunxibelelwanoUluhlu lweendwendwe okanye imephu yendawo.
Khuphela iitemplate zencwadana
Ngoku wena Siza kubonisa iitemplate ezininzi ukuze ube nazo sele ikhutshiwe kwaye ke uyisebenzise kwiinkqubo ezinje ngeAdobe Photoshop. Ungenza ngokwezifiso zakho njengoko ufuna kwaye ngenxa yoko une-triptych enobuchule kakhulu yokushiya umxhasi wakho onwabe kakhulu.
Khumbula ukuba sele unoluhlu lweCMYK ukuprinta. Ekuphela kwelayisensi kukunikezelwa kuyilo.
Uyilo lwala maxesha iimilo ezingafunekiyo ngee curve zazo kunye neemilo zayo zejiyometri leyo kakhulu kuhlaziya xa uqala. Incwadana yokwazisa ngesiganeko okanye ukuboniswa kwegama elinendawo ezahlukeneyo zokubhaliweyo kunye nee icon. Khumbula ukuba kuya kufuneka ucinge kumdali xa usebenzisa ezorhwebo.
Ikhonkco - ukukhutshwa
I-Triptych eluhlaza okwesibhakabhaka kwiiflaya
Le triptych ime phandle imigca yayo ediagonal kwaye iluhlaza okwesibhakabhaka oba ngumlinganiswa ophambili. Izakhiwo ziyasicacisa isizathu seshishini apho kunokwenzeka khona ukuba uthethe ngefemu yamagqwetha, abacebisi bazo zonke iintlobo okanye nkampani ezinikele kulwakhiwo okanye uyilo lwezithuba.
Incwadana yencwadana yeshishini-eluhlaza
I-triptych eyahlulahlula kwezi zimbini zangaphambili nge ukuba luhlaza kwaye oko kwangaxeshanye kuyafana nokwangoku. Indawo enkulu yelogo yenkampani kunye nothotho lweetekisi ezichaza injongo yenkampani, kunye nothotho lweengxelo zokucacisa iinkonzo okanye iimveliso. Ubuzaza obubandakanya le triptych bucacile.
Olunye uhambo oluhle olushiya ngokugqibeleleyo nabaphathi, abacebisi kunye namagqwetha ngobunzulu bayo kwaye zombini ziyabulela kakhulu kwizinto zayo zoyilo ezahlukeneyo. Akukho kunqongophala kwemifanekiso yokubonisa izakhiwo zenkampani kunye nothotho lwe "widgets" apho zibonisa umbono weenkonzo kunye neenkonzo.
Iimilo zejiyometri zethathu
Enye incwadana yeenkampani apho ukukhangela iindawo ezininzi zokubhaliweyo kwaye unokufuna inkampani efuna ukuthetha ngokucacileyo ngazo zonke iinkonzo abazibonelelayo. Imibala eyahlukeneyo yenza iphethini enika ubomi kunye nokutshintsha kwamandla kuyo yonke into enokusetyenziselwa ukuthengisa okanye iiarhente zentengiso.
Kule triptych sihamba ngqo kubomi esixekweni ukuba silandele ngeenjongo ezifanayo zangaphambili. Ziintathu zala maxesha kwaye apho ezinye iinkcukacha ezinje ngokuchwetheza, imibala esetyenzisiweyo kwiingxelo kunye nezo zinto zibonwayo ziyaxatyiswa ukudwelisa ezinye zezona ndawo zibalulekileyo zenkonzo okanye izindululo ezicetywayo yiarhente yentengiso okanye yentengiso.
Olu luhambo landela le migaqo ingasentla nangona udlala ngegradient ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nothotho lwemifanekiso ekhumbula ukuba ukuchukumisa kwedolophu kwiarhente, amagqwetha, abacebisi kunye nokunye. Ilandela ubuhle obufanayo kwimihlathi, nangona kugxininiswa ngakumbi kumagophe kunye nombala wombala. Enye i-triptych ekufuneka ithathelwe ingqalelo yokuba neentlobo ezahlukeneyo ezandleni zethu kwaye ke sinike izisombululo ezahlukeneyo kubathengi.
Incwadana yeshishini ngezandla
Apha abalinganiswa abaphambili zizandla ezibekwe njenge-triptych enokusetyenziswa ngokugqibeleleyo ngethoni yemfundo. Izandla zoopopayi ezibonisa ukuba icala eliqhelekileyo lezinto ezinokuba yikhosi yentengiso ekwi-Intanethi okanye ucwangciso lonyaka kuso nasiphi na isikolo. Incwadana enemifanekiso enolwazi kwaye ikhetheke kakhulu ngenxa yezandla ezichazayo.
Ubume bePolgonal ye-triptych
Ezinzulu, ezintle nezanamhlanje enkosi kumbala okhethwe kwingxelo kunye nezo zakhiwo ze-polygonal ezishiya igumbi labanobunkunkqele. Ingasetyenziselwa zonke iintlobo zeengcali, nangona izinto ezinje ngentengiso kunye nentengiso, ayipeyintwanga kwayona. Enye yee-triptychs ezimibalabala ezikolu luhlu ukuze ungaphoswa nayiphina.
I-Triptych enesangqa esinemibala
Umbala ngumlinganiswa ophambili njengoko zinjalo izangqa ezahlukileyo kule ncwadana yolwazi. Ikwadlalwa ngemibala eyahlukeneyo kwizivakalisi kunye nokungafani kwezi zangqa ezifanayo shiya i-triptych ngokugqiba okuhle kakhulu. Coca kwaye ucacele ezinye iintlobo zezisombululo ngaphandle kwezo zifundisiweyo ukuza kuthi ga ngoku.
Isixhumanisi: rel = »akukho nto ilandelayo» yokukhuphela
Iyafana nabanye kuluhlu, kodwa iimilo egosogoso kunye orenji ethatha eyona ndima iphambili ukuba ibe ngumsonto oqhelekileyo okhokelela umxhasi kwezona ndawo zibalulekileyo zenkampani yethu okanye iinkonzo esiza kuzinika.
Uhambo olunamacala amathandathu obunxantathu
Njengalapha i-hexagonal yile nto iyalelayoOluhlaza kwakhona luthatha ulawulo lwezinto ezibonakalayo kunye nombala wesicatshulwa ukwenza imvisiswano emnandi kwabo baphatha le ncwadana ezandleni zabo.
Incwadana yokuthengisa yobungcali
I-triptych leyo dlala namanye amakhadi kwaye apho kungabikho kusilela kwemifanekiso kunye nombala wokutsala imibala efudumeleyo. Suku phulukana nethiyori yemibala ukwazi izizathu zabo zokuba babe.
IiWebhu zokwenza ii-triptychs kwi-intanethi
Ikhonkco: Incwadana yeCanva
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Itemplate ukuyila ii-triptychs
YIVA KE KWINKQUBO YOMBUZO OKANYE NDINOKUYIVULA NJANI KE NDIYAYIFUNA UMSEBENZI WESIKOLO NDIWUKHUPHISE YAYE IPHUME KWIINKCUKACHA EZicocekileyo
molo ngokuhlwa okuhle ndinomdla wokukhuphela itemplate yokuqala esetyenziselwa ukuyila i-triptych kwisibonisi ethi xa ndizama ukuyikhuphela indinike impazamo, icinyiwe ngokuqinisekileyo kwaye bendifuna ukukubuza inceba yokuyilayisha kwakhona, mna Ndimtsha kule nto kwaye ngenene yonke imihla ndizama ukufunda okungakumbi, ndiyathemba ukuba uncedo lwakho lwebhlog efanelekileyo
Angelika ukuhambelana namanye amagama sitsho
NDINGAYENZA NJANI I-TRIPTYCH YAM
Iphulo lokulwa nokushiywa kwezilwanyana kwiiholide ezenziwe ngu-Estudio Yinsen
Guqula imizobo yamaphepha ibe ziingoma ezintle zedijithali